केवल तथ्यहरू: डिप्रेसन - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
केवल दु: खी महसुस वा असन्तुष्ट प्याच को माध्यम बाट जाने भन्दा, उदासीनता एक गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था हो जसलाई बुझ्नु, उपचार र एक राम्रो रिकभरी योजना चाहिन्छ। प्रारम्भिक पहिचान, निदान र एक प्रभावी उपचार योजनाको साथ, धेरै व्यक्तिहरू राम्रो हुन्छन्। तर यदि उपचार नगरिएमा, उदासिनता केवल ती मानिसहरूका लागि मात्र विनाशकारी हुन सक्छ, तर तिनीहरूका परिवारहरूको लागि पनि।
अनुमानित adult प्रतिशत अमेरिकी वयस्क जनसंख्या - करीव १ million मिलियन व्यक्तिहरू - गत वर्ष कम्तिमा एउटा ठूलो उदासीन एपिसोड थियो। यसले सबै जातीय, जातीय र सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दछ। महिलाहरू depression० प्रतिशत बढी पुरुषहरूले डिप्रेशन अनुभव गर्ने सम्भावना बढी हुन्छन्, र १ adults-२7 उमेरका युवा वयस्कहरू 16० बर्ष वा माथि उमेरका भन्दा depression० प्रतिशत बढी डिप्रेसन हुने सम्भावना हुन्छ।
डिप्रेसनको एकल कारण छैन। त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले उदासीनताको सम्भावनालाई बढाउन सक्छ जस्तै एक दर्दनाक घटना वा विगतको दुर्व्यवहार, पुरानो पीडा वा दीर्घ रोग, वा अर्को मानसिक रोगको उपस्थिति। जेनेटिक्सले भूमिका निभाउन सक्छ, साथसाथै मस्तिष्क संरचना, पिट्यूटरी ग्रंथिको कार्यमा परिवर्तन, निद्रा विकारहरू र ध्यान-घाटा hyperactivity डिसअर्डर (एडीएचडी) जस्ता शारीरिक कारक। पदार्थ प्रयोग समस्याको साथ करीव percent० प्रतिशत व्यक्तिहरू पनि डिप्रेसनको शिकार हुन्छन्।
डिप्रेसनका लक्षणहरू के के हुन्?
डिप्रेसनका मानिस, वा जो एक डिप्रेशनल एपिसोडको माध्यमबाट छन्, लक्षणहरू फरक तरिकाले अनुभव गर्दछन्। लक्षणहरू मुड, भावना वा शारीरिक पीडाको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ र सामान्यत: निम्न समावेश गर्दछ:
दु: ख, अश्रु वा निराशा को भावनाहरु
मृत्यु वा आत्महत्याको बारम्बार वा दोहोरिने उल्लेख
सुस्त सोच, बोल्ने वा शरीर चाल
अस्पष्ट शारीरिक रोगहरू
डिप्रेसनको कसरी उपचार गर्न सकिन्छ?
एक विशिष्ट मूल्यांकन र उपचार योजनाको साथ, डिप्रेसन अक्सर उपचारमा राम्रो प्रतिक्रिया गर्छ। उपचार विकल्पहरूले औषधि, मनोचिकित्सा, मस्तिष्क उत्तेजना उपचार र प्रकाश थेरापी समावेश गर्दछ। व्यायामले गम्भीर उदासीनताको उपचारमा मद्दत गर्दछ, एक्यूपंक्चर, ध्यान, पोषण, विश्वास र प्रार्थना सहित वैकल्पिक उपचारको साथ। डिप्रेसन लक्षण उपचारको साथ सुधार गर्दछ, तर यसले समय लिन सक्दछ। उत्तम उपचार खोज्नको लागि औषधी वा उपचार दृष्टिकोणको एक भन्दा बढी प्रकारको प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दछ। केही व्यक्तिको लागि लक्षणहरू चाँडै सुधार भएपछि उपचार सुरु हुन्छ, जबकि अरूलाई भने यसले लामो समय लिन सक्दछ।
परिवारका सदस्य वा साथीलाई सहयोग पुर्‍याउने जो डिप्रेसन हो
उदासिन कसैलाई सहयोग गर्नु चुनौती हुन सक्छ र तपाईंलाई असहाय महसुस गर्ने र के गर्ने भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। एक प्रियजनको लागि समर्थन प्रदान गर्न मद्दतको लागि, तपाईं:
उपचारको साथ टाँस्न प्रोत्साहन दिनुहोस्
सुन्न इच्छुक हुनुहोस्
सकारात्मक सुदृढीकरण दिनुहोस्
तनावमुक्त वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुहोस्
सहयोगी संगठनहरू पत्ता लगाउनुहोस्
सँगै योजना बनाउनुहोस्
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो याद राख्नुहोस् कि तपाईंको प्रियको डिप्रेसन कसैको गल्ती होइन, र तपाईंको समर्थन र समझदारीले सहयोग गर्न सक्छ। अरूलाई मद्दतको लागि सोधेर आफैलाई हेरचाह गर्नुहोस्। निराश वा जलेको हुनबाट जोगिनको लागि, तपाईंको आफ्नै शौकहरू, शारीरिक गतिविधि, साथीहरू र आध्यात्मिक नवीकरणको लागि समय खोज्नुहोस्। जबकि उदासीको लागि कुनै ज्ञात उपचार छैन, सही औषधि र उपचार दृष्टिकोणको साथ, यो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यो जानकारी मेडिको शिक्षा र अनुसन्धानका लागि मेयो फाउन्डेशन र मानसिक रोगको राष्ट्रिय गठबन्धनबाट पुनः प्राप्त गरिएको छ। थप पढ्न, भ्रमण गर्नुहोस्: